लिम्पियाधुरा नै नेपाली भूमिको सिमाना हो : नेकपाका नेता झलनाथ खनाल (भिडियो) — SuchanaKendra.Com
लिम्पियाधुरा नै नेपाली भूमिको सिमाना हो : नेकपाका नेता झलनाथ खनाल (भिडियो)
लक्की चौधरी/गोरखापत्र -भारत सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमोत्तर सिमानामा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र मिचिएको देखिएको छ । नेपाली भूमि मिचिएकोमा नेपाली जनताबाट देशव्यापी विरोध भइरहेका छन् । नेपाली भूमिमाथि छिमेकी मुलुक भारतको कब्जा कसरी भयो ? यथार्थ के हो ? यही विषयमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई गोरखापत्र संवादमा निम्त्याएका छौँ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश–
अहिले हामीले भनिरहेको समस्या कालापानीको मात्र होइन, लिपुलेकको मात्र होइन, लिम्पियाधुराको समस्या मात्र होइन । समग्र रूपमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारित गरिएको जुन सिमाना हो, खासगरी नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना, त्यसलाई निर्धारण गर्ने कुरा हो । सिमानालाई संरक्षण गर्ने कुरा हो । सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको हाम्रो भूमि भनेको छ । त्यही व्यवस्थालाई सबै नेपालीले फेरि एक पटक हेर्नुपर्ने भएको छ । त्यसले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीलाई हाम्रो सिमाना भनेको छ । त्यो सिमानालाई रक्षा गर्ने काममा हाम्रो भूमिका सुरुदेखि हुनुपर्ने थियोे, त्यसमा कमजोरी रह्यो । महाकाली नदीका अनेकन शाखा नदी छन् ।
नदीको मूल प्रवाहमध्ये कुन चाहिँ मूल प्रवाह हो, कुन शाखा हो ? माथि छाङ्रु पुगेपछि महाकाली नदीका दुई ठूला शाखा छन् । एकातिर लिम्पियाधुरा र अर्को लिपुलेकतिर जान्छ । नदीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘हाइड्रोलोजी’ (जलवायु विज्ञान)ले अध्ययन गर्छ । कहिलेकाहीँ विवाद आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा हामीले तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ । कुन चाहिँ नदीको शाखाको प्रवाह लामो छ ? लिम्पियाधुराबाट आएको शाखा तीन÷चार गुणा लामो छ । पानीको बहाव पाँच÷छ गुणा बढी पानी छ । जलाधार क्षेत्र पनि लिम्पियाधुराकै छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मूल प्रवाह हो भन्ने स्पष्ट छ । म आफैँ त्यो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर आएको छु । जहाँबाट महाकाली उद्गम भएको छ, त्यसलाई कुटी भनिन्छ । स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी पनि भनिन्छ । त्यसको अर्थ काली नदी हो । त्यही मूल प्रवाह भएकाले लिपुलेकबाट आएको शाखा र अन्य शाखा पनि त्यसैमा मिसिएर महाकाली नदी बनेको छ । लिम्पियाधुराबाट आएको बिन्दु (नदी) नै हाम्रो भूमिको मुख्य सिमाना हो ।
पहिला दमननाथ ढुङ्गाना र पछाडि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर निरीक्षण गरिएको थियो । म स्वयं पनि निरीक्षणमा गएको थिएँ । हामी त्यो भूमि देखेर अचम्मित भयौँ । धेरै अघिदेखि हाम्रो भूभाग भारतीय कब्जामा परेको रहेछ । हामीले संसद्मा कुरा उठायौँ तर त्यतिबेलाको सरकारले संसद्को कुरालाई पनि गम्भीरताकासाथ लिएन । त्यसैले यो समस्या कायम रहिरह्यो । अहिले आएर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि लिम्पियाधुरा पूर्व र लिपुलेकबाट आएको नदीको शाखालाई समेत अतिक्रमण गरिएको छ । यो गलत छ ।
टिङ्कर भञ्ज्याङलाई समेटेर भारतीय नक्सा बनेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् र आपत्तिजनक कुरा हो । यसले हाम्रो देशमा विरोधको तरङ्ग पैदा गरेको छ । यो स्वाभाविक हो । यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै सर्वदलीय छलफल राख्नुभयो । त्यसमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, दलका नेता, विशेषज्ञले समेत एउटै आवाज निकाल्नुभयो, नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरादेखिकै हो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सबैको एकमत आयो । सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमानालाई रक्षा गर्ने यो अहम् सवाल हो । यसको समाधान गर्नुपर्छ ।